Mogadishu Journal » 2018 » April » 27
Sacuudiga oo ku faanay in ay bur buriyeen Awoodii Iran ee Wadamada Afrika
Mjournal :-Dhaxal sugaha Boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed Bin Salmaan ayaa sheegay in ay ka adkaadeen awoodii siyaasadeed ee Iran ku laheyd wadamada Africa iyo dalalka deriska la ah. Wareysi uu siiyay Wargeyska US Times ee Mareykanka laga leeyahay, Dhaxal Sugaha Sacuudiga...
Madaxweynaha Hirshabeelle oo ku baaqay gurmad deg deg ah
Mjournal :-Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in qoysas ka badan 25 kun ay ku barakaceen daadadkii ugu danbeeyay ee ka dhuftay magaalada Beledweyne. Waare oo shir jaraa’id ku qabtay biyaha ku fatahay B/weyne dhexdooda ayaa sheegay in biyaha Wabiga...
Ciidamo ajnabi ah oo weerar ku qaaday deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose
Mjournal :-Ciidamo Mareykanka ah iyo kuwa Jubbaland ayaa Saakay waxa ay weerar ku qaadeen degaanka Baarsanguuni , waxaana halkaasi ay ku dagaallameen ciidamo ka tirsan Ururka Al- Shabaab. Degaanka Baar Sanguuni ayaa waxa ka dhacay dagaal socday mudo ka badan Saacad sidda ay...
Guddiga doorashada guddoonkao baarlamaanka oo diiday in korjoogto tagaan goobta doorashada
Mjournal :-Guddiga Doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa waxa ay sheegeen inaan loo baahneyn xubno korjoogto ka noqonaya Doorashada lagu balansan yahay in ay dhacdo Isniinta, 30-ka bishan April. Xildhibaan Nuur Iidow Bayle oo ah Guddoomiyaha Guddiga Doorashada Golaha...
Ra’iisal wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo la kulmay danjiraha Sweden
Mjournal :-Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Abuukaate Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa kulan gaar ah la yeeshay Danjiraha dalka Sweden u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya Andreas von Uexkull. Kulanka oo ahaa mid qaatay saacad iyo wax ka badan ayaa labada...